आँट पुग्छ, भने भारतले नाकाब’न्दी गरोस्, हामीले अब स्वतन्त्र बाँच्न सिक्नै पर्छ : डा. युवराज सँग्रौला – Sanchar Patrika
काठमाडौं । डा. का’नुनविद् एवं विश्लेषक प्राडा युवराज सँग्रौलाले नेपालको राजनीतिको फोहोरी खेलमा खेल्ने अधिकार भारतीय सञ्चार माध्यमलाई नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएको र उसलाई आफ्नो सीमानाको रक्षा गर्ने अधिकार छ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा नेपालको प्रधानमन्त्री र कुटनैतिक सबन्ध भएको देश चीनकी राजदूतको भेटघाटलाई जुन तरिकाले प्रस्तुत गरियो, यो भारतीय सरकारको लाचारी भएको बताएका छन् । सँग्रौलाले बुँदागतरुपमा यस विषयलाई यसरी टिप्पणी गरेका छन्ः
१) २०० बर्ष बेलायतले लु’ट्यो, अपमान गर्यो, तर भारतीयहरुलाई त्यसको अ’पमान महसुस छैन् ।
२) एक पटक चीनसँग यु’द्ध भयो, सधैं श’त्रुता हुन्छ ? दुर्इ सय वर्ष उपनिबेश बनाउने मित्र हुन्छ ?, सीमाना जोडिएको देश स’त्रु हुन्छ ?
३) नेपालका महान्यायाधिवक्ताको काम के हो ? देशको प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो अपमान हुनु देशको अपमान होइन ? राजदूत महोदय के गर्दै हुनुहुन्छ दिल्हीमा ?
४) सीमानामा प्रमाण पुर्याउन नसक्ने भएपछि, प्रोपोगन्डा वारमा भारत लागेको छ । भाततीय संचार माध्यम ट्र्म्पको रणनीतिलाई चीनका बि’रुद्ध प्रयोग गर्दैछन। भारतले एसियासँग बस्न सिकेन भने, उस्को दुर्दशा हुने छ। भित्र पसेर दुनियाँ बुझ्नु आवश्यक छ । भारत अमेरिकी चालको गोटि बनेको छ । नेपालमाथि पश्चिमी रणनीति र तिब्बती मु’द्दालाई उठाउन चीनलाई बि’बादमा ल्याउने रणनीतिको राम्रो हुँदै छ । तर भारतीय रबैया यही हो भने अब यस्कावि’रुद्ध ल’ड्नुपर्ने हुन्छ । एनजीओ चलाएर बसेकालाई यस घट’नाले किन छोएन ? यसैबाट थाह हुँदैन र ? भारत एक्लै नेपालमाथि प्र’हार गरि रहेको छैन । आँट पुग्छ, भने भारतले नाकाब’न्दी गरोस् । हामीले अब स्वतन्त्र बाँच्न सिक्नै पर्छ ।
जस्ताको तेस्तै स्टाटस
Prevकडकनाथ कुखुरामा फाइदै-फाइदा, व्यवसायी भन्छन् कडकनाथ खोज्दै खोरमै आउछन् [भिडियो सहित]